Jeôgrafian'i Borondy - Wikipedia
Ny jeôgrafian'i Borondy dia maneho ny vohon' ny tany sy ny biby sy ny zavamaniry, ny mponina sy ny tanàna ary ny toekaren'i Borondy.
1 Ny tany sy ny rano ary ny zava-manana aina
1.1 Ny sisin-tany
1.2 Ny vohon’ ny tany
1.3 Ny rano
1.5 Biby sy zavamaniry
2 Ny mponina sy ny tanàna
3.1 Amin’ ny ankapobeny
3.3 Ny fiompiana sy ny jono
3.4 Ny harena an-kibon’ ny tany sy ny taozava-bavety
3.5 Ny fifanakalozana amin’ ny any ivelany
Ny tany sy ny rano ary ny zava-manana aina[hanova | hanova ny fango]
Ny sisin-tany[hanova | hanova ny fango]
I Borondy dia firenena mitoka-monina ao Afrika Afovoany, izay hita ao amin’ ny faritry ny Farihy Lehbe. Mizara sisin-tany amin’ i Roanda ao avaratra sy i Tanzania ao atsinanana ary ny Repoblika Demôkratikan’ i Kôngô ao andrefana i Borondy. Elanelanin’ ny farihy Tanganyika sy ny renirano Ruzizi ny Repoblika Demôkratikan’ i Kôngô sy i Borondy. Mirefy 974 km ny sisin-tanin' i Borondy, ka ny 233 km iraisany amin' ny Repoblika Demôkratikan’ i Kôngô, ny 290 km dia itambarany amin' i Roanda, ary ny 451 km manefitra azy amin' i Tanzania.
Ny vohon’ ny tany[hanova | hanova ny fango]
Manana velaran-tany mirefy 27 834 km² i Borondy, ka ny 2180 km² dia rano. Isan’ ny firenena kely indrindra ao Afrika izy amin’ ny velaran-tany.
Ny ankabeazan’ ny taniny dia misy lembalemba avo sy havoana. Any antsinanana no mba misy tany lemaka. Mirefy 1 520 m ny salan’ ny haambo misy azy eo anelanelan’ ny ony Nily sy ny ony Congo. Mahatratra 2 684 m ny tendro avo indrindra ao Borondy ao amin' ny tapany atsimon' ny tendrombohitra Heka. Midina izany rehefa miantsinanana sy mianatsimo-andrefana. Ny farihy Tanganyika, izay manana haambo 772 m, no farira iva indrindra ao. Manasaraka an’ i Borondy sy i Tanzania ny renirano Ruzizi, izay sisin-tany manasaraka azy amin' ny Repoblika Demôkratikan’ i Kôngô, sy ny farihy Tanganyika izay samy ao amin’ ny Rift Valley.
Ireto avy ireo renirano lehibe ao Borondy: i Ruzizi (na Rusizi), izay mivarina any amin' ny farihy Tanganyika, sy i Malagarazi ary i Ruvubu izay isan’ ireo loharanon’ i Nily. I Gasumo, izay loharanon'i Nily atsimo indrindra, dia hita ao atsimon' i Borondy ao amin' ny faritanin' i Bururi. Ny farihy lehibe indrindra dia i Tanganyika izay itambaran' i Borondy amin' i Tanzania sy amin' ny Repoblika Demôkratikan’ i Kôngô ary amin' i Zambia. Misy farihy madinika maro koa ao, dia i Mwungera, i Narungazi, i Rwihinda, i Cohoha, i Kanzigiri, i Rweru ary i Gacamirindi, ka ny fantatra sy lehibe indrindra amin'izy ireo dia i Cohoha sy i Rweru izay ao amin' ny sisin-tany manasaraka an' i Borondy amin' i Roanda. Ahitana farihy madinika iray ny ao amin'ny faritra avaratr' i Borondy, dia ny farihy Dogodogo.
Manana toetanin-jana-pehintany mangatsiatsiaka an-tany avo i Borondy. Ny sala-maripana anatin’ ny taona iray dia miovaova eo anelanelan' 17 °C sy 23 °C, ka 21,1 °C izany eny amin’ ireo lembalemba fa 24,4 °C kosa ao amin’ ny Rift Valley. Amin’ ny main-tany, izay manomboka amin’ ny volana Mey ka miafara amin’ ny volana Aogositra, dia matetika misedra ny vokatry ny hain-tany i Borondy. Mahatratra 1 500 mm ny salan' ny rotsak' orana isan-taona. Ny fotoan' ny orana dia eo anelanelan' ny volana Febroary sy Mey, ary eo anelanelan' ny volana Septambra sy Novambra.
Fatrana tsy dia misy hazo firy no mandrakotra ny ankabeazan’ ny velaran-tanin’ i Borondy. Ripaky ny tavy sy ny fiandrasana biby fiompy tafahoatra ny ala. Ny kininina, izay hazo nampidirina mba hiadiana amin’ ny fikaon-tany, sy ny akasià ao amin’ ny fatrana atsinanana ary ny palmie fanamboarana menaka eny amin’ ny tany fambolena no fahita matetika any. Isan’ ny biby fahita any ny lalomena, ny voay, ny karazan-dambo (phacochère), ny leôparda ary ny antilôpa.
Ny mponina sy ny tanàna[hanova | hanova ny fango]
Hoto (Hutu) mpamboly ny 85 %n’ ny mponina ao Borondy fa ny 14 % kosa dia Totsy (Tutsi) mpiompy. Ny Toà(Twa), izay olona zeny (Pigmea) dia 1 %n’ ny mponina fotsiny.
Amin’ ny ankapobeny[hanova | hanova ny fango]
Na dia tsy dia manana anjara toerana lehibe eo amin’ ny toekaren’ i Borondy aza ny fiompiana omby, dia manana ny lanjany ara-kolontsaina sy ara-piarahamonina amin’ ny Totsy ny fananana andiam-biby maro. Miteraka fikaohana manimba ny nofon-tany anefa ny toeram-piandrasana. Mandroso dia mandroso ny fiompiana trondroary be mpanao ny fanjonoana eny amin’ ny renirano sy ny farihy.
Ny harena an-kibon’ ny tany sy ny taozava-bavety[hanova | hanova ny fango]
Ny fifanakalozana amin’ ny any ivelany[hanova | hanova ny fango]
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Jeôgrafian%27i_Borondy&oldid=998689"
Voaova farany tamin'ny 4 Desambra 2020 amin'ny 14:40 ity pejy ity.